Photo Gallery | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Dr Chit Nge’s Photo and images are filed here.
Posted on June 25, 2013 by chitnge
ကမ္ဘာသို့တိုက်ရိုက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) မြန်မာနိုင်ငံ Tags: Buddhism
Posted in Buddhism, Photo Gallery	| Tagged Buddhism	| Leaveacomment
အခါမလပ် ဆင်ခြင်အပ်သောဥာဏ်ပညာ အကြောင်း ဟောပြောပွဲ
Posted on March 21, 2010 by chitnge
ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ ဆရာကြီးဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) ၏ “အခါမလပ် မြော်မြင်ဆင်ခြင်အပ်သော ဥာဏ်ပညာ´´ အကြောင်း ဟောပြောပွဲမှ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည် —- Admin. No tags for this post.
Posted in Buddhism, Frontpage, Photo Gallery, Seminars	| Leaveacomment
Posted on March 6, 2010 by chitnge
လက်တွေ့ကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းခွင် ဟောပြောပွဲ IBC ၂၇-ဝ၂-၂ဝ၁ဝ လက်တွေ့ကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းခွင် ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို (၆)မိုင်ခွဲ ပြည်လမ်းရှိ International Business Centre (IBC) တွင် ၂၇-ဝ၂-၂ဝ၁ဝ နေ့ရက်၌ ကျင်းပရာ ယခင်ကျင်းပခဲ့သော အခမ်းအနားများကဲ့သို့ပင် အစီအစဉ်များကို နံနက် (၉းဝဝ) နာရီတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ်မှ လက်တွေ့ကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းခွင် အကြောင်းကို ဟောပြောစဉ် … Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်
Posted in Buddhism, Frontpage, Photo Gallery, Seminars	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
Posted on March 3, 2010 by chitnge
တရားတော်၏ဂုဏ် ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား ၁။ အခမ်းအနားစတင်ခြင်း အခမ်းအနားမှူးမှ အခမ်းအနား စတင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၊ ဆရာ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းကို Photo Slide Show ပြသသည်။ ဆရာ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းကို Photo Slide Show ကို Projector ဖြင့်ပြသရာ တက်ရောက်လာကြသော ပရိသတ်များမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကြည့်ရှုကြစဉ် …. Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်
Posted in Buddhism, Frontpage, Photo Gallery, Seminars	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on February 26, 2010 by chitnge
အလွှာတစ်ခုကိုထိုးဖောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ အဆိုပါဟောပြောပွဲကို ၁၇-၀၂-၂၀၁၀ နေ့တွင် International Business centre (IBC) ၌ ကျင်းပရာ ရှေးဦးစွာ အခမ်းအနားမှုးအဖြစ် ဒေါက်တာမေသက်မာလာမှ အခမ်းအနား စတင်ကြောင်း ကြေငြာပြီးနောက် ဆရာကြီးဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန)၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းကို Photo Slide Show ဖြင့် ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆရာကြီးမှ ဟောပြောပွဲကို နံနက် ၉း၃၀ ခန့်တွင် စတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ “အလွှာတစ်ခုကို ထိုးဖောက်ခြင်း” အကြောင်းအရာသည် ဆရာထုတ်ဝေ ရေးသားထားသော စာအုပ်၏ခေါင်းစဉ် ဖြစ်သည်။ … Continue reading →
Posted on December 12, 2009 by chitnge
Posted in Photo Gallery	|2Comments
Dr Chit Nge Photo
Posted on December 7, 2009 by chitnge